Endeavour House-Liphelile ixesha lokuZifumanisa
Khawube nomfanekiso-ngqondweni wakho uvuka usiva isandi seentaka nesandi solwandle. Uvula amehlo akho kwaye kukho ulwandle, lukhazimla kwilanga lasekuseni. Uthatha ikofu yakho yokuvuka ekuseni kwidesika kwaye apho uqala ukuphumla kwaye ujabulele iparadesi.
Uhambo olufutshane kunye nolwandle lukhona ngamanzi amema, isanti yegolide kunye nokufudumala kwelanga.
Eyona nto ingcono kukuba iparadesi ilula ngokugqibeleleyo iintsuku ezingama-365 ngonyaka.
Hamba nathi kwindawo esiyibiza ngokuba likhaya.
Ukuba ujonge indawo efanelekileyo elunxwemeni enemozulu emangalisayo uya kuyifumana apha eAgnes Water /1770. Iyunithi yahluke ngokupheleleyo kwindawo ephezulu apho sihlala khona. Kukho umnyango wangaphambili owahlukileyo kwaye unedesika yakho. Kukho amagumbi amabini okulala kodwa iyiyunithi kwaye ifanele ngakumbi isibini okanye usapho olunabantwana abancinci. Kulungile ukuba kukuhlala okufutshane kubantu abadala aba-4.
Sinendawo yokupaka ezitalatweni ekhuselekileyo kodwa ukuba asikho ekhaya ungasebenzisa indawo yokupaka ngaphandle kwesitrato phantsi kwecarport. Siza kuqinisekisa ukuba unako ukufikelela kule ndawo ukuze ukhulule ukuba sisekhaya.
Iyunithi inekhitshi elincinci elixhotyiswe kakuhle kodwa akukho oveni kunye nebbq enkulu yokupheka. Kukho indawo eninzi yefriji kwifriji encinci yempahla yakho.
Sinevenkile enkulu edolophini enayo yonke into onokuyidinga.
Ikhaya lethu liyunithi engentla ukuze uve ngathi sijikeleza. Singabantu abavuka kwangoko ke ukuba ufuna ukulala kwangethuba le propathi isenokungabi lolona khetho lwakho lulungileyo.
Iinkcukacha zabafowunelwa ukukunceda nakuphi na ukubhukisha ukhenketho okanye ezinye iimfuno zikwiyunithi.
4.71 ·Izimvo eziyi-86
4.71 · Izimvo eziyi-86
Indawo esikuyo yi-500m kuphela ukuya elunxwemeni nakwindawo yokuthenga ephambili ye-Agnes Water. Ipropathi ijonge ngaphezulu koLwandle lweCoral ngeembono ezisuka kumgangatho, indawo yokuhlala kunye negumbi lokulala eliphambili. Kukho iicafe ezininzi ezilungileyo kumgama wokuhamba kunye nenani leendawo zokutyela ezilungileyo. Iihambo eziya eLady Musgrave Island zihamba ukusuka ngo-1770 kwaye ukhenketho lokutshona kwelanga kwiindlela zamanzi ezinomtsalane nazo ziyimfuneko.
Kumgama omfutshane we-7-10min ukuhamba ukuya kunxweme olugadiweyo apho unokuqubha ngokukhuselekileyo okanye usebenzise ibhodi yokusefa, ukutyibiliza elwandle okanye ukusefa kwikite. Uhambo olude elunxwemeni luyamangalisa kwaye kukho ikhefi apho ungahlala khona kwaye ujonge ulwandle emva kohambo lwakho.
Siyavuya ukunxibelelana neendwendwe zethu xa sikufutshane kakhulu okanye kancinci njengoko unqwenela.